Maloto hatrany am-pahaterahana…
Edito Miandry izay sahy mijoro !
6 volana izay no lasa. Amin’ny ankapobeny, raha atao tombana ny zava-misy, dia teo aloha ny tohivakam-pitokanana ireo asa efa natomboky ny teo aloha.
Edito Aoka tsy ho variana!
Manomboka miverina tsikelikely amin’ny fiatrehana ny fiainany andavanandro indray ankehitriny ny Malagasy.
Kihon-dàlana farany ho an’ny fampielezan-kevitra anio sy rahampitso. Mety ao ihany koa no mbola mijery sy mandinika farany, ka mikofokofoka farany ireo kandida.
Nisongadina ny fihetsiky ny Filoha am-perinasa nanao propagandy ankolaka ny kandidany. Ara-bakiteny ilay hoe: “ratsy tarehy mangata-bady, ka ny anaran-dRay no enti-mangataka”. Ireharehana ny fivoizana ny hoe: “izahay no kandidam-panjakana nahazo tso-drano tamin’ny filoham-pirenena”. Ilay Filoha amin’io tsy te hahalala izay kihana samihafa fa mampiseho ny tena toetrany hatrany am-piandohana: tsy mpanara-dalàna, mpanao didin’ny be sandry,… ka toa mitohy ny 2009 sy ny tetezamita manaporofo ilay “sans qualités”. Takona ny zavatra sokajiana ho tsara sy mety. Voizina eto ny hoe: fanjakana tsara tantana, politikan’ny fitsitsiana, mangarahara,…. Voasoratra ao anaty tetibolam-panjakana ve ohatra ireo angidim-by sy fiaramanidina novidiana sa hofaina hatrany amin’ny 40 tapitrisa ariary isan’ora? Nisy antso tolo-bidy ve? Miorina amin’ny lainga sy fitaka ny fanjakana amin’ny fijapiana ny tetikasa nataon’ny hafa ambaran’ny Filoha fa azy. Ny tetibola iasan’ny mpitondra aza vao andro vitsy no nasiam-panintsiana ary ny teo no mody navadibadika. Kimaizimaizina, fitaka, kolikoly,… ve no mbola hamafisina hanomezana depiote maro an’isa hiaro izany? Mila tonga saina ny rehetra.